Boldenone Undecylenate (Dzimba) Raw material (13103-34-9) | AASraw
/ Products / vamwe / Boldenone Undecylenate (Equipoise) Raw zvinhu
Rating: SKU: 13103-34-9. Category: vamwe
MUTSVENE unobatsira nekugadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika kuhuwandu hweBoldenone Undecylenate (Equipoise) Raw material (13103-34-9), pasi peCGMP mutemo uye nehutsika hwehutano hwehutano.
Boldenone Undecylenate (Equipoise) Raw raw material video
Boldenone Undecylenate (Makira) Raw material material Basic Characters
Name: Boldenone Undecylenate (Makosheni) Raw material
Molecular Kurema: 452.6
Color: Mafuta matsvuku
Boldenone Undecylenate Raw kushandiswa kwezvinhu mune steroid cycle
Equipoise Raw material zvinowanzozivikanwa neBold U, BU, Equipoise Raw material, EQ nemuviridziilders kana vaGL.
Boldenone Undecylenate (Makanda) Raw Material Material Usage
Boldenone Undecylenate Raw material inowanzoshandiswa seiri injected mafuta. Mumusika, pane 200mg / ml, 250mg / ml, 300mg / ml, rimwe UGL rakaitwa kunyange 350mg / ml uye 400mg / ml. Asi, ichava yakasimba zvikuru kuti irege kuiswa.
Boldenone Undecylenate Raw nyaya inonyanya kuenzana nehomoni Dianabol, kunze kwe Dianabol hormone ndeyekushandisa mumuromo uye ine chikwata che 17AA uye nekuda kwechikonzero ichi ine nguva yepfumbamwe hafu yeupenyu. Equipoise Raw material haina boka re17AA rinoita kuti Dianabol rive rakfupi kwenguva refu, zvichiita kuti EQ irambe iri mumuviri kwenguva yakareba uye naizvozvo ichiita kuti ibudirire zvikuru pakuvaka masimba musimba uye simba.
Boldenone Undecylenate Raw material, iyo inonziwo EQ, inoshandiswa nevadziviriri vemitambo uye vatambi kuti vawedzere musimba wavo, kuwedzera kutsungirira nekukwira masero matsvuku ekubuda ropa mumuviri unobatsirawo kutsungirira nokuti masero matsvuku eropa anotakura oksijeni uye kana ropa rako rakazara okisijeni, iwe unogara kwenguva yakareba panguva yekushanda nesimba kana kushanda. Boldenone Undecylenate Raw material, kana EQ inozivikanwa pakati pevatambi, vanovaka muviri uye vane fitness vanoda nekuti inopa pfupi zvishoma asi zvishoma nezvishoma munguva yepamusoro yekutengesa. Aya maitiro anonzi EQ inowanikwa. EQ inogona kugadziriswa mumatokisi ayo anobva ku200mg kusvika ku600mg kwevhiki kwemavhiki masere asingapfuuri.
Warning on Boldenone Undecylenate Raw material
Kunyangwe ichiramba ichishanda kwenguva yakareba, Equipoise Raw zvinhu zvinojowa kamwe chete pasvondo nevatambi. Inonyanya kushandiswa pachiyero che200-400mg (4-8 ml, 50mg vhezheni) pavhiki yevarume, 50-75 mg pasvondo yevakadzi. Kana 25mg vhezheni ikave yega chigadzirwa chinowanikwa, iyo jekiseni vhoriyamu inogona kusanzwisisika. Iyo muyero chirongwa inogona kupatsanurwa, pamwe majekiseni anopiwa rimwe zuva roga roga kuti kuderedze kusagadzikana. Mumwe anofanirwa zvakare kutora chenjera kutenderera jekiseni nzvimbo nguva dzose, kuitira kuti udzivise kutsamwa kana hutachiona. Inofanirwa kuve yakawandisa vhoriyamu yemafuta kujowa mune imwe saiti, chiputi chinogona kuumba chinoda kudhirowa. Kuti vadzivise dambudziko rakadai, vatambi vanowanzo gumira jekiseni rega rega ku3ml uye voshandisa zvekare saiti yega yega kwete kanopfuura kamwe pasvondo, kunyanya rimwe svondo. Iine Equipoise Raw zvinhu izvi zvingangoda kushandisa kwete chete gluteus, asiwo zvidya zvekunze zvejojo ​​saiti. Ehezve matambudziko ese ane hukama ne25mg uye 50mg zvigadzirwa zvakabviswa zvinobviswa neiyo nyowani 100 mg uye 200mg / ml shanduro dzeiyi steroid, izvo zvinonyatso kupa mushandisi yakawanda dosi rusununguko uye jekiseni nyaradzo.
Imwe nharo yakakomba yeEquipoise Raw nyaya ndeyehafu yenguva-hupenyu, iyo inogona kunge inenge mazuva 12. Izvi zvinokonzera nguva yakareba kwenguva mushure mekupihwa kwekupedzisira panguva iyo mazinga akasawana akakwana zvakakwana kuti agone kubatana nevanabolism, kana kuderera zvakakwana kubvumira kupora kuitika. Mhinduro yechinetso ichi ndoshandisa Equipoise Raw mativi mune imwe nzvimbo yapfuura yepakati.
Kunze kwekuda kweEQ pamusoro pe Dianabol, Equipoise Raw nyaya ichangobva kukura mukuzivikanwa uye inofarira simba. Coaches inofunga EQ senzvimbo yakasarudzwa yekushandura Deca Durabolin, nokuda kwekuti simba rinobudirira uye hutano hwehutachiwana hwemaviri neEQ hunoitika pasina madhara anokonzera aDaa. Uyezve, EQ inobatsira kuparadzirwa kweropa mumuviri wose, iyo inopa mitezo yemuviri yako nehuwandu hwekuyerera kweropa iyo yavanoda panguva huru dzekudzidzisa uye / kana kusimudza.
Haisi chivako chokukurumidza kuwedzera, panzvimbo pekuti Equipoise Raw nyaya ichaongororwa kuti ipe pfuma inononoka asi inogara yakasimba yehutano uye hutsika hwemasimba. Mhedzisiro yakaisvonaka yezvinodhaka iyi inoonekwa kana inoshandiswa kwenguva yakareba, kakawanda inogara kwenguva refu kupfuura mavhiki e8-10 munguva. Mutsipa wakawana haufaniri kunge uri huwandu hwakanaka hunoonekwa ne androgens, asi hunotsanangurwa uye hwakasimba. Sezvo mvura inopisa isingabatsiri zvikuru kudarika kwemaviri, huwandu hwehukuru hwakakonzerwa pamusangano weEquipoise Raw nyaya inogona kuchengetwa mushure mekunge mishonga yaregwa. Zvinonakidza kuziva kuti rakagadzirwa neEquipoise Raw nyaya uye zvekare zvinodhaka zvinodhaka Dianabol zvinenge zvakafanana. Muchiitiko cheEquipoise Raw material iyo shanduro inoshandisa l7beta ester (undecylenate), nepo Dianabol iri 17 alpha alkylated. Kunze kweizvi mamolekyu akafanana. Ichokwadi kuti vanoita zvakasiyana chaizvo mumuviri, izvo zvinoratidza kuratidza kwe 17-methylation zvinopfuura kungoita mutsara unoshanda steroid.
Ichi ndicho testosterone yakakosha uye Equipoise Raw zvinhu zvakachengetwa. Iyo Equipoise Raw zvinhu inobvumidza yakaderera pazasi muyero weiyo testosterone, pasina kubayira zvakanyanya maererano nezviwanikwa zvinotarisirwa. Estrogen buildup inofanirwa kudzora neiyi stack, zvakadaro zvakadaro inofanira kusvika nhanho painobatsira mukusimudzira nyika yevanabolic. Iyo huru yekutanga vatambi-yekuvaka sitaki. Kutenderera kukuru kwevatangi vese mukuvaka muviri uye vamwe vanoda kuwana pahukuru. Mhedzisiro inoguma mukuwandisa kuwanda pamwe zvine mwero uyerogen zvivakwa.
EQ ine mutsi wemvura yakasvibirira. Min order 10grams / 10ml.
Nzira yekutenga Boldenone Undecylenate Raw material: kutenga Equipoise Raw nyaya kubva kuAASraw